Dastabej » अफगानिस्तान युद्धः ‘तालिबान लडाकुहरू राजधानी काबुल छिरे,’ के अमेरिकी सेनाले ३०० नेपालीको उद्दार गर्ला ?
अफगानिस्तान युद्धः ‘तालिबान लडाकुहरू राजधानी काबुल छिरे,’ के अमेरिकी सेनाले ३०० नेपालीको उद्दार गर्ला ? – Dastabej
अफगानिस्तान युद्धः ‘तालिबान लडाकुहरू राजधानी काबुल छिरे,’ के अमेरिकी सेनाले ३०० नेपालीको उद्दार गर्ला ?
अफगानिस्तानमा तालिबान लडाकुहरू राजधानी काबुल प्रवेश गरेको विवरणहरू प्राप्त हुन थालेका छन्। समाचारसंस्था रोएटर्सले आन्तरिक मामिलामन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै जनाएअनुसार लडाकुहरू राजधानीको सबैतिरबाट छिरेका हुन्। तालिबान समूहले काबुलमा हिंसा नगर्न र बाहिरिन चाहनेलाई सुरक्षित रूपमा निस्किन दिन आफ्ना लडाकुहरूलाई निर्देशन दिएको दोहास्थित एक नेतालाई उद्धृत गर्दै रोएटर्सले जनाएको छ। उनले सुरक्षा दिइएका क्षेत्रतर्फ जान महिलाहरूलाई आग्रह समेत गरेका छन्।आइतवार बिहान मात्रै लडाकुहरूले पूर्वी सहर जलालाबादलाई बिनासङ्घर्ष नियन्त्रणमा लिएका थिए। बीबीसीकी याल्दा हकिमका अनुसार काबुल छिर्ने क्रममा तालिबान लडाकुहरूले खासै ठूलो प्रतिरोध खेप्नुपरेको छैन।
अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनीले अमेरिकी दूत जाल्माइ खलिलजाद र नेटोका उच्च अधिकारीहरूसँग आपत्कालीन वार्ता गरेको विवरणहरू आएका छन्। तालिबान लडाकुहरू राजधानी काबुलमा प्रवेशद्वारहरूमा पुगेको विवरण आएकै बेला बैठक भइरहेको हो।तालिबानले आक्रमण तीव्र पारेयता शनिवार पहिलो पटक राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति गनीले मुलुक “गम्भीर खतरामा” रहेको बताएका थिए।
तीव्र रूपमा सरकारी फौजहरूको विफलतासँगै राजीनामाका लागि राष्ट्रपतिमाथि दबाव बढ्दो छ। तर आइतवार अपराह्ण अफगान राष्ट्रपतिको कार्यालयले स्थिति नियन्त्रणमा भएको दाबी गरेको छ। राष्ट्रपतिको कार्यालयले पाश्तो भाषामा ट्विटरमा लेखेको छः “काबुलमा फाट्टफुट्ट गोली चलेको छ, काबुलमा आक्रमण भएको छैन। सहरको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न देशका सुरक्षा र प्रतिरक्षा फौजहरू विदेशी साझेदारसँग मिलेर काम गरिरहेका छन्, स्थिति नियन्त्रणमा छ।”
तर एक अफगान सांसद फर्जाना कोचाईले बीबीसीलाई मानिसहरू राजधानीबाट भाग्न कति आतुर छन् भनेर बताएकी छन्।”मलाई थाहा छैन, उनीहरू कहीँ पनि जान सक्दैनन्। कुनै ठाउँ बाँकी छैन। विमानहरू भरिएका हुनसक्छन् अनि आज काबुलबाहिर – जस्तै भारत वा अन्य छिमेकी मुलुक जाने – उडान पनि। मैले त्यता जान लागेका साथीहरूसँग सोधेकी थिएँ।” “उनीहरूका अनुसार विमान भरिएका र आफूहरू अड्किएका छन्,” उनले भनिन्।
यद्यपि उक्त समूह विद्रोही फौजमा परिणत भयो र घातक हमलाहरू निरन्तर जारी राख्दै अफगान सरकारलाई अस्थिर बनायो।अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनले सन् २०१४ मा आफ्नो सैन्य अभियानअन्त्य गर्‍यो र अफगान फौजलाई तालिम दिनमा मात्रै आफूलाई सीमित राख्यो।त्यसपछि तालिबानले देशभरि आफ्नो प्रभावक्षेत्र विस्तार गर्न खोजेको थियो। आफ्नो नियन्त्रणबाट खोसिएका क्षेत्रहरू फेरि कब्जा गर्ने प्रयास तालिबान लडाकुहरूले गरे।तर अमेरिका भने एक्लैले हवाई हमलालगायत युद्ध कारबाही चलाएर निरन्तर सक्रिय रह्यो। तालिबानले पनि आफ्नो गतिविधि कायमै राख्यो।
अफगानिस्तानबाट सोभियत सेना फर्किएपछि सन् १९९० को दशकमा पूर्वार्धमा एउटा कट्टरपन्थी धार्मिक अभियान सुरु भयो। अधिकांश पाश्तुन समुदायका व्यक्तिहरू संलग्न भएको तालिबान अभियानबारे सन् १९९४ मा बारे धेरैले थाहा पाए। साउदी अरबबाट आएको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित कट्टरपन्थी सुन्नी इस्लामबारे पढाइने विद्यालयहरूबाट सो अभियान सुरु भएको विश्वास धेरैको छ। पाश्तुनहरूको बाहुल्य भएको पाकिस्तान र अफगानिस्तानका क्षेत्रहरूमा शान्ति र सुरक्षा स्थापित गर्ने वाचासहित आफ्नै इस्लामिक कानुन अर्थात् शरिया कार्यान्वयन गर्ने तालिबानको उद्देश्य थियो। तालिबानले दुवै देशमा हत्यारा र व्यभिचारीहरूलाई सार्वजनिक रूपमा मृत्युदण्ड दिन थाल्यो। चोरी गरेको प्रमाणित भए अङ्गभङ्गको दण्ड दिइन्थ्यो। तालिबानको प्रभाव भएको क्षेत्रमा पुरुषले दाह्री पाल्नै पर्ने र महिलाले पूरै शरीर छोपिनेगरी बुर्का लगाउनै पर्ने बनाइयो।टीभी, चलचित्र र सङ्गीतमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो। अनि १० वर्ष र त्यसभन्दा माथिका बालिकालाई विद्यालय जान दिइएन।
भिडिओ क्याप्शन सुरु हुँदैछ,अफगानिस्तानमा चर्कंदो हिंसा
३१ श्रावण २०७८, आईतवार १६:४६ प्रकाशित